I-Spotify iceba ukutshintsha ukhetho lomculo lwabasebenzisi "basimahla" | Iindaba zeGajethi
Spotify uceba ukutshintsha ukhetho lomculo lwabasebenzisi "simahla"
I-Spotify sisicelo sokusasaza umculo kwimfuno yesizathu esicacileyo, yenye yezinto ezimbalwa ezibonelela ngesiqulatho simahla. Nangona kunjalo, kwizixhobo ezikwidesktop iyasivumela ukuba sikhethe umculo esiwufunayo, kwizicelo eziphathwayo kufuneka silungiselele ukuveliswa komxholo okhoyo ngoku okungahleliwe, akukho khetho, lixabiso lokuhlawula ngokungahlawuli. inkonzo, ukongeza kuluntu rhoqo, into esengqiqweni. Nangona kunjalo, I-Spotify ifuna ukubonelela ngomxholo ongcono kubasebenzisi bayo "yasimahla" kwaye yiyo loo nto isebenza ngendlela entsha yokudlala.
Ngokwenza oku ufuna ukunika inkululeko ngakumbi kwabo basebenzisa iiakhawunti zasimahla. Ngokwolwazi oluvela ku- esengozini, U-Spotify uyathetha neefemu ezinkulu zomculo ukubonelela ngomxholo kwimfuno yabasebenzisi basimahla naboOku kuthetha ukuba abo bangayihlawuleliyo le nkonzo banokukhetha neengoma ezithile phantsi kwaziphi iimeko. Nangona kunjalo, sicinga ukuba kule meko, umculo esinokuwukhetha uya kuba ngulowo uhambelana nefashoni, okanye ezo ngoma okanye amagcisa anelebheli ahlawule iSpotify ngenjongo yokukhuthaza umxholo wawo. Asinalo ulwazi oluthe kratya malunga nendlela iSpotify ezakusebenzisa ngayo ukusivumela ukuba sikhethe umxholo.
Njengoko becacisile, kuyakubakho uluhlu lokudlala oluncinci, olunje nge "pop charts", apho sinokukhetha ngokukhululekileyo ingoma ukuba siyiphulaphule, mhlawumbi siya kufumana iingoma ezithandwayo kakhulu zomzuzu kwaye sinokukhetha phakathi kwazo ngokungacacanga. Into engenamsebenzi kakhulu, kuba asizukukhetha ingoma kuluhlu, xa siza kudlala lonke uluhlu kwaye kungekudala okanye kamva simamele eyona siyithandayo. Ngamafutshane, kuya kufuneka sinike ingqalelo kumanyathelo alandelayo eSpotify.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Spotify uceba ukutshintsha ukhetho lomculo lwabasebenzisi "simahla"
I-HTC 11 inokulawulwa yi-Snapdragon 835